Gịnị Gbanwere Banyere Corporate Blogging N'ime Afọ Ndị A? | Martech Zone
Ọ bụrụ n ’esoro m n’afọ iri gara aga, ịmara na m dere Gingde blọgụ maka Dummies ke edem ke 2010. Ezie na odida obodo nke dijitalụ media nwere nnukwu mgbanwe ndị ikpeazụ 7 afọ, M na obi na-emeghị n'aka na e nwere ọtụtụ mgbanwe mgbe ọ na-abịa akwụkwọ na ụlọ ọrụ ndị na-emepe emepe a ụlọ ọrụ ịde blọgụ atụmatụ. Ndị ọchụnta ego na ndị ahịa na-agụ agụụ nnukwu ozi, ụlọ ọrụ gị nwere ike ịbụ akụ ha na-achọ.
Ya mere Gbanwee na Corporate Blogging?
mpi - na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụla ụlọ ọrụ launching a ụlọọrụ blog, Ohere nke na-olu gị nụrụ na ìgwè mmadụ ahụ bụ ebughibu… ma ị na-ikenye ihe dị ịrịba ama. Blog posts 7 afọ gara aga bụ narị okwu ole na ole ma eleghị anya nwere obere onyonyo. N'oge a, vidiyo na onyonyo na-achịkwa ọdịnaya ederede. Ọdịnaya ga-abụrịrị onye nyochara nke ọma na edere ya karịa onye ọ bụla na-asọmpi ma ọ bụrụ na ị nwere olile anya na ọ ga-adọta okporo ụzọ na mgbanwe dị mkpa.
Frequency - ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa na-akụda, enwere nnukwu ọdịnaya dị ukwuu na -emepụta ma anaghị eri ya. Anyị na-elele oge ole ị na-ede blọgụ dị ka egwuregwu nke ohere - ọkwa ọ bụla mere ka o yikarịrị ka a ga-achọta, lelee, kesaa, ma soro ya. N'oge a, anyị na-etolite ọba akwụkwọ ọdịnaya. Ọ bụghịzi maka ịmeghachi na ugboro ole, ọ bụ maka iwulite edemede ka mma karịa onye na-asọmpi gị.
Media - yana wordcount, ọdịdị nke ọdịnaya agbanweela n'ụzọ dị egwu. Bandwidth na-enweghị njedebe na nhọrọ ntanetị na-etinye pọdkastị na vidiyo na aka onye ọ bụla nwere smartphone. Anyị na-anwa ịnye ọdịnaya dị iche iche site na usoro ọ bụla iji nweta ihe onwunwe kwesịrị ekwesị.
mobile - ọbụnadị na ndị ahịa anyị B2B, anyị na-ahụ nnabata nke ndị na-agụ agagharị na saịtị ndị ahịa anyị. Inwe ọnụnọ ngwa ngwa, nke na-anabata ma na-ekere òkè abụghịzi na nhọrọ.
Weebụsaịtị Nrụpụta mepụtara nke a dị ịtụnanya infographic, The Ọnọdụ nke ginglọ Ọrụ Ntanetị & Ihe Nmalite Ndị Nduzi na Otu E Si Mepụta Blog nke na-ejegharị anyị site na ntanetị ịde blọgụ ụlọ ọrụ, ihe ngosi ndị mmadụ na-agụ, omume onye na-agụ, ndụmọdụ ederede, mmekọrịta mmekọrịta, na ịkpụgharị ntụgharị na ozi infographic a.
Tags: 2017ịde blọgụụlọ ọrụ ịde blọgụmgbasa ozi mgbasa oziala nke ịde blọgụonye webusaiti